﻿ ​‘बाढी नियन्त्रण, बाटो निर्माण र रोजगारी व्यवस्था मुख्य चुनौति’
​‘बाढी नियन्त्रण, बाटो निर्माण र रोजगारी व्यवस्था मुख्य चुनौति’
सु्नसरीको इटहरी वार्ड नं. १० इटहरीकै ग्रामिण वडामा पर्छ । दुई वटा खोलाले घेरेको यो वडामा समस्या धेरै भएपनि जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका काम अघि बढिरहेको छ । वडाको काम, योजनाको विषयमा वडाध्यक्ष प्रकास चौधरीसँग न्युजलयकी सरिता भण्डारीले लिएको अन्तर्वार्ता
आजभेली योजनाहरुको सम्झौता, उपभोक्ता समिति गठन, यस्तै विकास निर्माणका कामहरुमा व्यस्त छौँ ।
पहिलेको तुलनामा अहिले अलि सुधारिदै गएको छ । हामी अहिले शहर छेउमा छौँ । तर त्यतिबेला वडाको विकास एकदम पिछडिएको अवस्थामा थियो । त्यतिबेला ग्रभेल पनि थिएन । वर्षाको समयमा बाटोहरु जताततै हिलै हिलो हुन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो छैन ।
वडाको कुन कुरालाई पहिलो प्रथमिकता दिनु भएको छ ?
वडाको विकासको मुल मेरुदण्ड नै बाटोघाटो भएकोले हामीले पहिलो प्राथमिता बाटो निर्माणमा नै दिएका छौँ ।
यो वडाको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हाम्रो यो वडामा सुकुम्बासीको संख्या बढी भएकोले गर्दा पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढी नै छ । वडाको सरकारी विद्यालयहरुलाई हामीले पनि केहि सहयोगहरु प्रदान गरिरहेका छौँ ।
वडाको कार्य गर्नको लागि कर्मचारीहरुले राम्रै सहयोग गरिरहनु भएको छ । तर पनि वडामा कर्मचारीको अभाव भने रहेको छ ।
वडामा कतिको कामको चाप हुने गर्दछ ?
वडामा विभिन्न कामहरु भइरहने भएकोले कहिले अत्याधिक चाप समेत हुने गर्दछ । कुनै दिन त्यति साह्रो चाप हुँदैन ।
तपाईले चुनाव आगाडी जनतालाई दिनु भएको आश्वासन के–के पुरा गर्नु भयो ?
चुनावको समयमा जनताहरुलाई मैले त्यस्तो ठुलो कुनै आश्वासन दिएको थिइनँ । सामान्यतयाः मानिसका आधारभुत आवश्यकताहरु पुरा गर्ने मेरो पहिले वाचा रहेको थियो । जसमा पहिले सबै ठाउँहरुमा बाटोघाटो निर्माण गर्छु भनेको थिएँ । सोही अनुरुप अहिले कामहरु भइरहको छ ।
त्यस्तै शिक्षाको गुणस्तरको कुरा भएको थियो त्यो पनि अहिले पहिलेको भन्दा राम्रो हुँदै गइरहेको छ । त्यस्तै युवा र महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि विभिन्न किसिमका शिपमुलक तालिमहरुको व्यवस्था गरेका छौँ । बजेट सानो भएपनि सबै क्षेत्रहरुलाई समेटेर लगेका छौँ ।
यो वडामा मुख्य समस्या के रहेको छ ?
यो वडा एउटा बाढी पिडीत एरियाको रुपमा रहेको छ । यहाँ एकातिर बुढी खोला छ भने अर्कोतिर टेंग्रा खोला रहेको छ । दुइतिर खोला भएकोले बाढीको समस्या रहेको छ । त्यस्तै पिछडिएका वर्गहरु बढी भएकोले शिक्षाको कमि पनि रहको छ । त्यस्तै बेरोजगारीको पनि समस्या रहेको छ । त्यस्तै वडा कार्यालय आफ्नै जग्गामा छैन ।
यो वडाको विकासको लागि के गर्नु पर्ला ?
सबै भन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधारहरु बाटोघाटो निर्माण गर्नु पर्छ । त्यसपछि जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्नु पर्छ । त्यपछि रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्छ ।
यो वडाको विकासको लागि कोसँग के माग राख्नु भएको छ ?
सर्व प्रथम बुढीखोलाको तटबन्धको माग राखेका छौँ । त्यसपछि टेंग्राको व्यवस्थापन, सडक कालोपत्रे, स्कुलको स्तरोन्तति र वडा कार्यालयको स्थापना लगायतका मागहरु राखेका छौँ । वडाको कार्यालयको लागि हामीसँग सार्वजनिक ऐलानि जग्गा रहेको छ त्यसको लागि बजेटको माग गरिरहेका छौँ ।
अन्त्यमा नगरका सरोकारवालाहरुलाई वडाको बजेट छुट्याउने बेलामा वडाको आर्थिक भौतिक स्थितिहरु हेरेर छुट्याउनु होस भन्न चाहान्छु ।